Sampana STK – FPMA Toulouse
Tamin’ny taona 1997 no niforona ny STK Toulouse. Ny STK dia sampana mitaiza sy mikoloko ny tanoran’ny fiangonana ka mampivelatra azy ireo amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra, iainany izany finoana izaany amin’ny fiainana mahatanora azy . Ny tanjona dia ny hahatonga azy ireo ho tanora vavolombelon’i Jesoa Kristy, « mba ho tonga fianarana ho an’ny mino amin’ny fiteny, amin’ny fitondran-tena, amin’ny fitiavana, amin’ny finoana, amin’ny fahadiovana » . 1 Timoty 4 :12
Amin’ny teny frantsay avokoa ny fifanakalozana eo anivon’ny STK, na eo aza ny ezaka ataon’izy ireo sy ny hetaheta handala ny tenindrazana. 73 no isan’ny mpikambana ankehitriny
Ny tanjon’ny STK dia ny hanamfy orina ny finoana an’i Jesosy Kristy izay ivon’ny sampana. Fa mikendry koa ny ho sampana mihetsiketsika sy mavitrika tsara ho an’ny Fiangonana.
Mampivondrona ny tanora, miahy azy ireo, miara-mitombo ao amin’i Jesosy, ny STK koa dia sehatra natokana ho an’ny tanoran’ny fiangonana, mba tsy hisy hanao tsinotsinona ny fahatanorany, fa hahatonga azy ho fianarana ho an’ny mino.
Farany, ny STK dia tanora malagasy iray fianakaviana sy mpiray tampo ao amin’i Kristy
FITAIZANA MAHARITRA :
Fotoam-bavaka isaka zomà
« Vendredi des Jeunes » rehefa zomà voalohan’ny volana
Fotoam-bavaka nasionaly isaky ny alatsinainy voalohan’ny volana, karakarain’ny Vaomiera Aim-panahy nasionaly. 50 eo ho eo no mandray anjara amin’izany isam-bolana
Famerenan-kira ho fikarakarana ny Isantaona na hetsika hafa hanasana ny STK (mariazy sns)
Fiofanana ara-panahy ataon’ny Mpitandrina
STK Break : fihaonana indray mandeha isan’enimbolana hiarahan’ny tanora milalao , fa sady misy fotoam-bavaka sy fiarahana mizara « goûter » ihany koa
Family Group : Miaraka ao anato vondrona 3 na 4 ny mpikambana dia mifampizara Teny, mifanakalo hevitra ihany koa momba ny fiainany, ny adintsainy sns. Satria mpianakavy ao ami’ny Tompo, dia sehatra iray afahana mifampitondra am-bavaka sy itomboana eo Aminy izany.
Rojom-bavaka. Fitaizana ny tanoran’ny STK mba hiombom-bavaka isan’andro, araka ny 1Tes 5 17 izay mitaona antsika tsy hitsahatra ny hivavaka mba tsy hamono ny Fanahy
Isantaona : ankalazaina isaky ny Asabotsy sy Alahady fahatelon’ny volana Novambra matetika. Hetsika lehibe ao anatin’ny taona hideran’ny tanora an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny hira, fijoroana vavolombelona, dihy. Fotoana iray itomboana amin’ny fanompoana an’Andriamanitra amin’ny alalan’ireo talenta nomeny ny tanora, ary faranana amin’ny fanompoam-pivavahana tarihin’ny sampana.
Mifandimby isaky ny roa taona ny RNSTK (Rencontre nationale) fiarahan’ny STK rehetra manerana an’i Frantsa, sy ny RRSTK (Rencontre régionale) , fihaonana eto anivon’ny faritany Atsimo Andrefana. Izany dia mba afahana :
manamafy ny fifandraisana sy ny takalo eo amin’ny sehatra samihafa
mandray fampianaram-pinoana mitovy ho an’ny rehetra
mampanao asa iraka lehibe ho an’ny Tafo na ny faritany izay mandray ny fihaonana
BIRAO STK 2022 -2023
Filoha: Riana RAJAOBELINA . rianarajaobelina@hotmail.fr
Filoha mpanampy : Asara RATSIMANDRESY.
Mpitantsoratra: Eloîse ANDRIAMIANDRA. eloise.andriamiandra@gmail.com
Mpintambola: Gaël RAZAFINDRAZAKA
Mpitantsoratry ny vola : Haritiana RAZANAJATOVO